Atụmatụ YouTube SEO kachasị na-arụ ọrụ! - SoNuker
Atụmatụ YouTube SEO kachasị na-arụ ọrụ!
Ihe omuma ihe omimi vidio na ebili. Otu akụkọ bipụtara na 2018 site na State nke Inbound chọpụtara na 45% nke ndị ahịa ahịa mụbara ego ha na YouTube ma e jiri ya tụnyere ọwa ndị ọzọ. Ebe nrụọrụ weebụ a na - ekesa vidiyo a ma ama na - ewu ewu nke ndị mmadụ, yabụ ọ dị mkpa iji bulie ọdịnaya gị na YouTube.
Nke a bụ usoro atụmatụ SEO SEO egosipụtara na nsonaazụ:
1. Jiri a lekwasịrị isiokwu ịkpọ gị video faịlụ.
Yiri ka optimizing blá »gá» and na isiokwu, á »‹ ga-achá »onye SEO ngw tool to á» rá »to mata isi Keywords iji mee ka video isiokwu anya. Ozugbo ahuru isiokwu, ikwesiri ibute ya na vidiyo vidiyo tupu ibugo ya na YouTube. Buru n'uche, YouTube enweghị ike "ịlele" ọdịnaya nke vidiyo iji chọpụta mkpa ọ dị na isiokwu ahụ. Enwere ọnụọgụ ole na ole ebe a ga-etinye isiokwu isiokwu lekwasịrị anya na ibe nlele vidiyo mgbe ebipụtara na ọdịnaya vidiyo. YouTube nwere ike ịgụ aha faịlụ vidiyo na koodu metụtara ya niile metụtara ya mgbe ebipụtara.
2. Ebuli video nkọwa.
Google nyere gị mkpụrụ edemede 1,000 maka nkọwa YouTube. Nke a ọ pụtara na ọ dị gị mkpa ijupụta oghere ahụ niile? Mba! Ezie na ị maa ike dee ihe ruru 1,000 odide, ọ na-atụ aro na ị na-adịghị. Ndị na-ekiri ihe nkiri nwere mmasị na vidiyo, ọ bụghị ịgụ edemede.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ide nkọwa dị ogologo, YouTube ga-egosipụta akara mbụ nke mbụ, nke ruru ihe ruru 100. Mgbe nke ahụ gasịrị, achọrọ onye na-ekiri ya ịhọrọ "gosikwuo" iji lelee nkọwa niile. Ọ bụ ya mere eji atụ aro ka ị bute nkọwa ahụ na nkọwa dị mkpa dịka njikọ dị mkpa na CTA.
3. Jiri ewu ewu isiokwu metụtara isiokwu gị iji kpado vidiyo gị.
Dabere na YouTube Academy's Academy, jiri mkpado na-agwa ndị na-ekiri ihe isiokwu vidio banyere. Nke a na-agwa ma ndị na-ekiri ya ma YouTube. Ikpo okwu a na-adabere na mkpado iji ghọta ọnọdụ na ọdịnaya nke vidiyo ahụ. Nke a bụ otu YouTube si enyocha otu esi ejikọ vidiyo gị na vidiyo yiri ya. Nke a na-agbasawanye ogo ọdịnaya gị. Họrọ mkpado gị nke ọma. Zere mkpado ndị na-adịghị mkpa n'ihi na Google nwere ike taa gị ahụhụ maka ịme nke a. Yiri ịde nkọwa ahụ, jiri isiokwu dị mkpa, kpọmkwem ogologo-ọdụ na okwu ndị a na-ejikarị eme ihe.
4. Fanye isiokwu na a eke ebe na aha.
Mgbe onye nlere na-enyocha vidiyo, a na-adọrọkarị ha na isiokwu ahụ. Nke a na - ekpebi mgbe niile ma onye na - ele ya ga - ahọrọ vidiyo ị ga - ele. Nke a bụ ihe mere aha ahụ kwesịrị iji dị nkenke, doo anya, ma sie ike. Isiokwu ndị ahụ na-arụ ọrụ dị oke mkpa na aha vidiyo, mana ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na isiokwu ahụ dị nso na ihe ndị na-ekiri na-achọ.
Echefula idebe aha ahụ dị mkpirikpi, ruo ihe odide 60. Nke a na-enyere ya aka dabara na peeji nsonaazụ.
5. Bulite a ahaziri thumbnail oyiyi maka video N'ihi njikọ.
Ihe onyonyo onyonyo vidiyo bu “onyonyo” mbu onye nlere na-enweta mgbe ha n’aghaghari na ndepụta nsonaazụ vidiyo. Onyonyo thumbnail na aha vidiyo ga-enye ngosipụta izizi nke ọdịnaya vidiyo. Nke a na - emetụta ọnụ ọgụgụ clicks na vidiyo vidiyo ga - enweta.
Have nwere nhọrọ nke ịhọrọ thumbnail oyiyi na-akpaghị aka-site YouTube; agbanyeghị, a na-atụ aro ya nke ọma site na iji thumbnail omenala. Dabere na Onye Okike Academy, 90% nke vidio vidio YouTube kachasị elu na-eji thumbnails omenala. Ha na-akwado iji ihe oyiyi nwere pikselụ 1280 720 2 dị XNUMX MB ma ọ bụ karịa. Chekwaa faịlị dịka .gif, .jpeg, .png, ma ọ bụ .bmp. Site n'ịnọgide na ntọala ndị a, thumbnail gị ga-apụta otu ihe n'ofe ọtụtụ nyiwe ikiri.
Otu ihe ị ga-ahụ bụ na akaụntụ YouTube gị ga-ekwenye tupu ị bulite thumbnail omenala.
Ugbu a ị nwere ike ịmepụta SEO kachasị mma, vidiyo YouTube dị elu na ndụmọdụ ndị a. Gaa Leta SoNuker.com maka nkọwa ndị ọzọ.
Newzọ ohuru iji kpọsaa na YouTube Enwere ọtụtụ ihe kpatara YouTube ji bụrụ usoro ịga vidiyo na-egwu vidiyo maka ihe karịrị nde mmadụ 2 n'ụwa niile. Ihe ikpo okwu a nwere nde 30 kwa ụbọchị active
Kedụ ka ndị ga-esi zoo ahịa na ọgbọ na-aga site na YouTube?
Generation Z mejuputara ndi amuru n’agbata 1995 na 2010. Ndi otu ndi mmadu a kariri puku mmadu ma obu Generation Y na 2019, na-ejide 32 pasent nke onu ogugu uwa nke 7.7 ijeri, na 25.9 pasent nke…